Xisbiga UCID oo Dhoolatusyo waaweyn ka sameeyay Gobolada Somaliland oo dhan | Somaliland.Org
Xisbiga UCID oo Dhoolatusyo waaweyn ka sameeyay Gobolada Somaliland oo dhan
October 30, 2012	Hargeysa (Somaliland.Org)-kumanaan ka mid ah Tageereyaasha Xisbiga mucaaridka ah ee UCID ayaa maanta dhoolatu syo balaadhan ka sameeyay fagaareyaasha magaalooyinka waaweyn ee wadanka oo dhan.
Taageereyaasha xisbiga UCID oo luxayay calanka xisbiga iyo murashaxiinta xisbigaasi ayaa maanta banaan bax weyn ka sameeyay fagaaraha beerta Xoriyadda ee magaalada Hargeysa. Waxaana halkaasi khudbado ku wajahan doorashada ka jeediyay Hoggaanka sare ee xisbigaasi.
Musharaxa jagada madaxweynaha ee UCID Md. Jamaal Cali Xuseen oo hadal u jeediyay taageereyaasha xisbigiisa,ayaa uga mahad celiyay taageerada ay u muujiyeen UCID, waxaanu yidhi “Maanta magaalada Hargeysa waxay muujisay taageerada ay u hayso xisbiga cadaalada iyo daryeelka UCID. waxaanan rajaynaynaa inaad codkiina siisaan xisbigan cadaalada iyo daryeelka.”
“Waana haddii aad doonaysaan inaad jaanis noo siisaan inaanu baarlamaanka iyo madaxtooyada aanu awood ku yeelano si aanu idinka (bulshada) wax idiinku qabano,”ayuu yidhi Murrashaxa Madaxweynaha Xisbiga UCID.
Gudoomiyaha xisbiga UCID Eng. Faysal Cali Waraabe, ayaa dhaliilay maamuladda dawladaha Hoose ee imika xilka haya oo uu tilmaamay inaanay wax badan u qaban bulshadda.
“Doorashada la galayaa waa tii dawladaha hoose, waana dadkii magaalooyinka maamuli lahaa, waxaana muuqata inaan dawladaha hoose aanay shaqadoodu qabsan balse ay dalka iibsadaan,”ayuu yidhi Guddoomiyuhu.
Guddoomiyuhu wuxuu sheegay in murashaxiinta ay Goleyaasha deegaanka u soo xuleen ay yihiin kuwo wax ka qaban doona horumarinta magaalooyinka Somaliland adeegyadooda aasaasiga ah, waxaanu yidhi “Waxaan rajaynaynaa inaad soo saari doontaan musharaxiinta aanu idiin soo xulnay,kuwaas oo bilic u samayn doona magaalada, waxaan idinka codsanaynaa inaad xisbigan Ucid Guusha siisaan.”
Sidoo kale, waxa halkaasi ka hadlay Guddoomiye Ku xigeenka Koowaad ee xisbiga UCID Aadan Jaamac Hoori iyo Xoghayaha cusub ee UCID Axmed Kayse, kuwaasi oo ka waramay barnaamijka xisbigooda ee ku wajahan waxqabadka magaalooyinka iyo ahmiyada doorashada Goleyaasha deegaanka ee dalka ka dhici doonta 28-ka Bisha fooda inagu soo haysa ka qabsoomi doonta dalka.
Sidoo kale, siday ku soo waramayaan weriyeyaashayada gobolada iyo degmooyinka waxa xisbiga UCID ay maanta taageereyaashoodu ka sameeyeen isu soo baxyo qeyb ka ah ololaha doorashada deegaanka oo galay maalintiisii labaad.
Previous PostMadaxweyne Siilaanyo oo dhambaal tacsi ah u diray qoyskii CUMAR NUUR AXMEDNext PostJaaliyadda Somaliland ee Minnesota oo soo Dhaweyn Taariikhi ah Ku Qaabishey Wasiir Caddaani	Blog